Iindaba - Ngaba iibhayisekile zombane ziyalunciphisa ngokwenene ushushu lwemozulu?
Njengobungqina obungakumbi nangakumbi obukhokelela kwimpembelelo enkulu yemozulu yabantu, uninzi lwethu lukhangela zonke iindlela ezinokuthi zifikelele kwiinjongo zemozulu. Ezothutho zezinye zezinto ezinegalelo elikhulu kwiigesi zegreenhouse. Ke ngoko, iyavakala into yokuba ukujonga iindlela zokuphucula iindlela zothutho kufuneka kube yinxalenye yezicwangciso zemozulu. Nangona kunjalo, umbuzo uhlala nokuba iibhayisekile zombane kufuneka zibe yinxalenye yencoko.
Iibhayisikile zombane ziZithuthi eziKhupha iZero
Into yokuqala kunye neyona nto ibalulekileyo ekufuneka uyiqaphele ngeebhayisikile zombane kukuba azikhuphi nto xa zibaleka. Iibhetri zombane kunye neemoto zimsulwa njengombonakalo wokugcina kunye nokusebenzisa amandla njengoko kunjalo ngoku. Akukho ziphumo zamachiza kwaye akukho mveliso.
Ziindaba ezimnandi ezo kuye wonke umntu. Kumiswe kakuhle ukuba iigesi zegreenhouse zichaphazela ubushushu bomhlaba, zidlala indima enkulu kutshintsho lwemozulu olubangelwa ngabantu. Nangona kunjalo, kukho ixesha elifutshane kunye nenzuzo yasekhaya nayo. Iinqwelo zokukhutshwa kweZero azivelisi nayiphi na into engcolileyo kwaye engathandekiyo. Ngelixa iinjini zangoku zomlilo zangaphakathi zingabikho ndawo zikufutshane nezimbi njengookhokho babo, abafezekanga. Amandla ombane angenza umohluko omkhulu kule nkundla.
Umbane usebenza ngokukuko
Ingxaki enkulu kwizithuthi zombane kukuxinana kwamandla obuchwephesha betekhnoloji yangoku. Oku kunokwenzeka ukuba kuphuculwe ngokuhamba kwexesha, ukwenza iibhayisikile zombane kunye nezinye izithuthi ngakumbi nangakumbi. Nangona kunjalo, bayenzela oku ngokubhekisele ekusebenzeni kwamandla. Iimoto zombane zinokuguqula inani elincinci lamandla ombane zibe ngamandla amakhulu.
Ngelixa izithuthi zombane zingenakho ukukhutshwa, ukuvelisa umbane kunako. Ngaphandle koku, ukusebenza ngokukuko kwezithuthi zombane kunceda ekuqinisekiseni ukukhutshwa okukuko okuphantsi, nokuba umbane uveliswa ngezibaso.
Ngapha koko, ubunzima obuphantsi beebhayisekile zombane kuthetha ukuba bathintelwe amandla oxinano lweebhetri xa kuthelekiswa neemoto zombane kunye neelori. Ngamafutshane, zezona zinto zibalaseleyo zokukhupha umoya, ukusebenza kakuhle kwesithuthi. Ukusuka kwimbono yokusetyenziswa kwamandla asezantsi, phantse akukho ndlela zingcono zokuhambisa amandla.
Iibhayisikile zombane ziThutho oluNzulu
Esinye sezizathu eziphambili zokuba abagxeki bangaziqwalaseli iibhayisikile zombane kumcimbi wemozulu kukuba bahlala bejongwa njengezinto ezinqabileyo. Nangona kunjalo, iibhayisekile zombane ziyindlela yokuhamba enzulu.
Iibhayisekile zingasetyenziswa njengeyona ndlela iphambili yokuhamba kwezigidigidi zabantu unyaka wonke. Ngelixa kufanelekile ukuthi ibhayisekile yombane ayinakuba luncedo kwikhephu okanye kwimvula egqithisileyo, inokuba ntle kwezinye iimeko. Ukuba abantu abaninzi banokutshintsha isiqingatha sohambo lwabo lonyaka ngokukhwela ibhayisekile yombane, inokuba nefuthe elikhulu.
Kwaye iibhayisikile zombane ziluncedo kwimisebenzi emininzi yorhwebo njengokuhambisa. Iinkampani ezininzi zizama ukwenza i-bikes ezinkulu zombane ezinokusetyenziselwa ukuhanjiswa kwendawo. Oku kuya kuba nefuthe elikhulu ekunciphiseni ifuthe lemozulu.
Iibhayisikile zombane ze-EABL ziyazingca ngokuba yinxalenye yomzamo wokufikelela kwiinjongo zemozulu zehlabathi. Ukuba unomdla wokutshintshela ekusebenziseni ibhayisekile yombane, jonga ikhathalogu yethu. Uya kuba ubalaseleyo emhlabeni.